Fifidianana … fitadiavam-bolan’ny sasany | NewsMada
Fifidianana … fitadiavam-bolan’ny sasany
Mampihazakazaka ny sasany fatratra amin’izao fifidianana izao ny hahazo fahefam-panjakana, na haka ny toeran’ny filohan’ny Repoblika. Politika io, ady fiady… Na izany aza, mahavalalanina ireo mpihazakazaka: inona loatra ny mahamaika? Eo ny hoe fitiavan-tanindrazana, tamberin’andraikitra amin’ny vahoaka, fitsinjovana ny taranaka ho avy… Marina ve izany? Eo ny vahoaka sy ny tantara hitsara.
Inona loatra tokoa no mampihazakazaka? Misy antony hafa ao, ary izay aza, angamba, no tena mahamaika ny sasany. Eo, ohatra, ny hoe tombontsoa manokana, ny fampiasana ny fahefam-panjakana ho amin’izany. Iaraha-manaiky izany, oviana, taiza amin’ny tany mahantra toy ny aty Afrika, ohatra, no hoe nisy mpitondra fanjakana sy mpanao politika nahazo fahefam-panjakana ka lasa fadiranovana?
Hafa ny ray aman-dreny, lany fatotra amam-pondrana manao izay hahatafita ny zanany: tsy mitandro hasasarana, mikely aina… Na heverin’ny Malagasy ho raiamandreny aza ny mpitondra, tsy araka izany ny tena zava-misy sy izay atao: mpitondra mihinana vahoaka no misy hatramin’izay? Tsy mahagaga raha tsy mba misy fihatsarany ny fiainam-bahoaka, na manankarena aza i Madagasikara. Nahoana?
Any amin’izay mamatsy vola amin’ny fampielezan-kevitra ny tamberin’andraikitry ny mpitondra sy ny mpanao politika voalohany, fa tsy amin’ny vahoaka… fakana vato hanamarinan-tena amin’ny fahazoana fanjakana fotsiny. Mba hisy amin’izay àry ve ny fiovana amin’izany rehetra izany amin’izao fifidianana izao? Mba ny vahoaka tokoa no hotsinjovina, andaniana mondron-kery, anaovana tamberin’andraikitra…
Iza, hono, no hihazakazaka eo raha handaniam-bola aman-karena, hahakely aina… Na ny tsy fandaniana manontolo izay vola azo atsy sy aroa amin’izao fampielezan-kevitra izao ihany aza, ohatra, mampiroboka sy mampibitaka ny sasany amin’ny sitrany ahay: fifidianana … fitadiavam-bola aloha amin’izay lafiny izay? Mbola hamidy aza izay vato kely azo amin’ny fihodinana faharoa… Misy izany? Aza variana…